Vanadium hydride (VH2), marka heerkulku ka kaco 25 ° C ilaa 200 ° C, cadaadiska sii daaya hydrogen wuxuu aad uga kici doonaa 0.19 mpa (1.9 cadaadiska hawada) ilaa 87 mpa (870 cadaadis hawo), taas oo la dhihi karo waa kombaresarada ku habboon.
Caanaha molecular VH2
CAS Maya midna
Barta dhalaalida Maya
Cufnaanta Noaa - 6
Isticmaala waxyaabaha lagu daro biraha
Vanadium hydrogenated ah
Magaca Shiinaha: Vanadium hydride
Qaaciddada Molecular: VH2
Miisaanka jirka: 55.9812
Vanadium hydride (VH2), marka heerkulku ka kaco 25 ° C ilaa 200 ° C, cadaadiska sii daaya hydrogen wuxuu aad uga kici doonaa 0.19 mpa (1.9 cadaadiska hawada) ilaa 87 mpa (870 cadaadis hawo), taas oo la dhihi karo waa kombaresarada ku habboon. Hydadium hydride waa hydride bir ah oo kala guur ah. Curiyeyaasha 'scandium', 'vanadium', 'chromium', 'nickel', 'palladium', 'lanthanide' iyo 'actinide' ee ku jira biraha kala-guurka ayaa sameysan kara iskudhafyo binary ah oo wata hydrogen.
Waxyaabaha ay ka mid yihiin hydadium hydride:
(1) VH2 waa mid aad u deggan. Marka heerkulku yahay 13 ℃, cadaadiskeeda kala-baxa ayaa gaaray 1.01 × 105Pa. Qaaciddada falcelinta waa 2VH2 → 2VH + H2.
(2) Birta birta ah ee hydride waa walax bir ah oo cawl leh, ka dib nuugista hydrogen, ballaarinta naatikada.
(3) Cufnaanta Hydride waxay qiyaastii 6% ~ 10% ka hooseysaa birta vanadium.
(4) Birta vanadium waxay noqotaa mid jajaban ka dib markay nuugto haydrogenka. Kuleylka ilaa 600 ℃ ~ 700 ℃ faaruq ah, haydarka faniiniyada waa la jarjaray. Marka la sii daayo haydarojiin, adkaanta vanadium ayaa hoos u dhacda waxaana dib loo soo celiyaa hantida caagga ah.
(5) Lama falgaleyso biyo, ama karkaraya hydrochloric acid, laakiin waxaa lagu qaadaa oksijiin. Hydadium hydride-ka waxaa loo isticmaalaa isku-darka alloys-ka kaydinta hydrogen-ka, awooddiisa keydinta haydarojiin waa weyn tahay, waa dhismo rajo leh
Hore: Hafnium Hydride Powder, HfH2
Xiga: Budada Zirconium Hydride, ZrH2
Vanadium hydride budada
Warshadaha budada ah ee loo yaqaan 'Vanadium hydride'
Warshad budada ah oo loo yaqaan 'Vanadium hydride'
Soosaarayaasha budada Hydride hydride
Vanadium soo-saare budada hydridev
Vanadium hydride budada Qiimaha
Qudaarta 'Vanadium hydride Quotes'